Umhla My Pet » Indlela Umhla – Old School Style
Ixabiso Ukongeza kuthatha phantse yonke into, kuloo juice mango okungenanto ngoku siqulathe calcium wongezelela, evenkileni leyo uthengisa iimveliso esele yenziwe ifomula oluphuculweyo. kanti, kukho abo ikhetha esidala, naxa kufikwa kubudlelwane?
nokuba, Ungabacebisa ubudlelwane kweediliya Usabambelele amanzi MANTRAS ezintsha-ubudala? Ngaba njengoko zinqweneleka njengegolide? Makhe sibone ukuba.
Gcina chivalry ephila
Cela kwizibini, ayibophileyo ubudlelwane obude nempumelelo ngento bazenzela Nqakraza kwaye mhlawumbi baya kukhankanya intlonipho ukuba aye ahlala ngamnye ezinye. Nje kuba abafazi ukulwela ukulingana yonke imihla, akuthethi ukuba nawo ekulweni chivalry. Umfazi ibiya bathanda ukuba babe nolwalamano linene ngubani Ukhupha esitulweni okanye waluvula ucango kubo. Ukwenza oku ngenxa yomfazi ubonisa intlonipho yaye into ekufuneka Nasemva kokuba umtshato.
Musa ukulala nomsindo
Izibini abaye ukuphikisana kufuneka usoloko ezama ukuyisombulula ngayo ngokuzolileyo phambi kokubiza kokuba ubusuku. nokuba, ngaphambi kokuba umntu utolike imiba, kuyimfuneko lokudambisa phantsi kuqala, njengoko uzama ukufumana isisombululo ekubume wobulali-up kuya kundenza kuphela imeko. Kufuneka sikhumbule ukuba ingxoxo kwenzeke nomntu ke eluthandweni kwaye lowo angayikhangeli, ngoko kubalulekile yayo ukusombulula lo mbandela ulungiswe ngoxolo.
Gcina njengokutsha komlilo
Xa abantu ababini uqalise ukuthandana, benza imigudu ukuqinisekisa ukuba umzuzu ngamnye uziva ezikhethekileyo, kumpha luthando nomsa . Ukuba ubuhlobo ukuba athathe ixesha elide, nokuba, izibini kufuneka asebenze nzima ukuze agcine umgangatho ofanayo nokuzibophelela. Bonke ubudlelwane kufuneka amahla ndinyuka, leyo yinto eqhelekileyo. nokuba, kufuneka sivumele ubudlelwane ubuyise isihlalo. Kufuneka siqhubeke ubudlelwane ezikuphefumla efanayo phambi, ngenxa yokuba yinto wagcina ndawonye ngelo xesha kwaye ahlale ndawonye kumaxesha ezayo.
Zama ukuba sicande ngosuku ngaphandle ngokuxubusha izincomo ezikhethekileyo. Isenokuba nokumncoma ngendlela iqabane lakho ukhangela, indlela ivumba okanye kangakanani axatyiswayo. Baxelele ukuba kunqabile kakhulu, ngaphezu kwegolide. Eyona nto ibalulekileyo kukuba umntu abe ngokunyanisekileyo ukuyityibela zabo. Ke ezi zinto zincinane ezenza ubudlelwane ibhadlileyo. Eli cebiso kunokuba kweediliya , kodwa isebenza ebalulekileyo kuzo zonke ubudlelwane yangoku.
Balela nokubanjonga ngokumanga
Kangangoko ngokuxubusha nokubanjonga kiss linokuvakala ilula kwaye angade isibini unandiphe ulwalamano lwabo, kuthetha kakhulu kwaye ishiya ngasemva kakhulu onobubele. Ukwabelana nokubanjonga kiss yenye yeendlela ibhetele yokubonisa ukuba ndithi kuba ngamaqabane abo. koko, ngokwenza oku ngemihla inceda ukomeleza ubudlelwane, njengoko ibonakalisa uthando lwabo omnye komnye.
Thatha izidlo kunye
Ukuthatha kunye izidlo inceda ukugcina iqhina phakathi izibini ngamandla noqolileyo. Ziphephe iimeko apho elinye iqabane utya kwigumbi lokutyela, ngoxa omnye ke lokuphumla kwigumbi, ubukele umabonwakude. Oku impilo ngenxa yokukhula nayiphi ubudlelwane. Ukuthatha kunye izidlo isibini ithuba lokuncokola. nokuba, uqaphele ukuba chat kufuneka wenze isidlo kube mnandi, leyo ethetha izihloko ezibangela iingxabano iimpikiswano kufuneka kuphetshwe. Ndandisithi yokuthatha kunye izidlo kukuba lokuphumla, ngoko ukukhetha izihloko kumnandi ukuncokola.
Ukugcina Inkangeleko ngawo onke amaxesha
Ubani kufuneka Masisoloko sikulungele ukuya ngaphezulu ngokuphucula imbonakalo yabo, ukwenzela ukuba babe nesimilo esihle amaqabane abo. Kulungile, ukuze mhlawumbi donning ngokwabo isuti okanye ilokhwe cocktail ukuze ayivakali kakuhle maxa onke, kodwa bahlale uhlambulukile, entle ngenkangeleko yaye kakuhle wabeka kunye kunyanzelekile. Akumthathi iinzame kakhulu ukukhangeleka kakuhle ukuze iqabane enye, ingakumbi ukuba oku kuya kukunceda ekomelezeni ubudlelwane, njengoko ngamnye amaqabane baya kukwazi ukugcina uthando lwabo omnye ephila ngalunye.
Akukho ndlela ibhetele yokubonisa ukuba omdala igolide ngaphezu kwezi ubudlelwane icebisa. Gold isinyithi ezixabisekileyo ezixabisekileyo kakhulu. Ezikuphefumla efanayo, ezi kweediliya icebisa zixabiseke kakhulu kubudlelwane yangoku. ngoko ke, kubalulekile ukuba nabani na ulwalamano baziqhelanise ezi ngcebiso uze ugcine yintlantsi ephila ngonaphakade.